Booliska Soomaaliya oo Faahfaahin ka bixiyay Weerarro iyo Qaraxyo ka dhacay Muqdisho. – XAMAR POST
Booliska Soomaaliya oo Faahfaahin ka bixiyay Weerarro iyo Qaraxyo ka dhacay Muqdisho.
By Mohamed Abdi On Feb 16, 2022
Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed Cabdifatax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Xalay seqdii dhexe xili ay ku beegneeyd lixsaac oo habiinimo Saldhiga degmada kaxda iyo xaafadda Daarusalaam ay xubno ka tirsan Al-shabab ay ku qaadeen weerar Xoogan, kaa oo sida uu sheegay ay iska difaceen Ciidamada Dowladda.
Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed ayaa ugu horeeyntii Sheegay in Degmada kaxda ,xubno ka titsan Al-shabaab ay weer ku qaadeen Saldhiga degmada kaxda, Isagoona shegay in ay Al-Shabaab ku waxyeeleeyen Dad shacab ah oo saldhiga ka agdhawaa iyo Saldhiga Booliska Degmada Kaxda.
“Muhiimadda loo weeraray Degmadaasi waxa ay aheeyd Degmada oo beryahan waday Hormar dhanka is kaashiga ah, Dhismooyinka iyo Wadooyinka oo ay inta badan degmadaasii ku bogaadisay Dadka Hormarka ay waddo, waxaana ka hortagay Ciidamada Dowladda,, ayuu yiri Afhayeenka Booliska oo warbaahinta la hadlayay.
Afhayeenka ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda oo isku gurmaday ay baacsadeen kooxihii soo weeraray Degmada Kaxda.
Dhanka kale Afhayeenka ayaa sheegay in Kooxda Al-Shabaab ay weerareen Degaanka Daarusalaam, halkaasna uu ka dhashay Khasaaraha ilaa iyo 16 qof oo dhaawac ah dhimashada 2 qof iyo 3 askari oo ay oo gareen Waxyeelo xoogan.
Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed ma uusan bixin faahfahin intaasi dheer, Waxaana isasoo tarayo Khasaaraha ka dhashay weerarada ka dhacay Degmada kaxda iyo Degaanka Daarusalaam.
Maxay tahay Sababta Cali yare Cali looga hor istaagay in uu ka duulo Garoonka Aadan Cadde?
Koofur galbeed oo maanta qabaneyso Doorashada kuraas kamid ah Gollaha Shacabka.